दाइजो कम ल्याएकी भन्दै घर निकाला गरिएकी विमलाले कहिले न्याय पाउँलिन् ? | रेडियो फूलवारी १०५.४ मेघाहर्ज
Home मुख्य समाचार दाइजो कम ल्याएकी भन्दै घर निकाला गरिएकी विमलाले कहिले न्याय पाउँलिन् ?
दाइजो कम ल्याएकी भन्दै घर निकाला गरिएकी विमलाले कहिले न्याय पाउँलिन् ?
पिडित विमला कुमारी यादव
लहान । २०७२ जेष्ठ १७ गते जानकीनगर ८ श्रीपुरकी विमला कुमारी यादवका लागि खुशीको दिन थियो । किनभने उनी अर्नमा गाउँपालिका ५ (साविक कृष्णपुर ७) सरोज यादवसँग हिन्दु परम्पारा अनुसार वैवाहिक बन्धनमा बाँधिएकी थिइन् । विवाह खुशीका साथ नै सम्पन्न भयो । विवाहमा दाइजोसहित, भोजभतेर र सरसमान गरी १४ लाख भन्दा बढी खर्च भएको विमलाका बुबा लक्ष्मेश्वर यादवले सुनाए । दाइजोमा ५ लाख नगद, मोटरसाइकल बराबरको थप २ लाख दिएको र एक तोला सुन पनि कबोल गरेका थिए । विवाहको दिन आधी तोला सुन दिए । अरु सुन बाँकी थियो । पैसाको अभावले पछी दिन्छु भनेर समधीलाई आग्रह गरेका थिए, लक्ष्मेश्वर यादवले बताए ।
तर, त्यही बाँकी आधी तोला सुनका कारण विमलाको खुशी धेरै दिन सम्म रहेनन् । उनीमाथि वर्ष दिन नपुग्दै ससुरामा कुटपिट, गाली÷बेइज्जती श्रृख्ला नै सुरु भयो । कुटपिट पटक–पटक हुनथालेपछि उनी न्यायका लागि प्रहरीमा पुगे । प्रहरीमा पुगेपछि उनी घरबाट निकाला गरिएका छन् । परिवारजनले घरको झगडाले किन ? प्रहरीमा गयो भनेर घर निकाला गरिदिएको पिडित विमलाले सुनाईन् ।
घरमा जेठाजु, देवर, जेठानी, सासु सबैले पटक–पटक कुटपिट गथ्र्यो । धेरै दुःख दिदैँ छन् । खान, लगाउन पनि समस्या दिन्छ । उजुरी गर्न जिल्ला प्रहरी गए । प्रहरीले छलफल गरिदियो । केही निर्णय भएन् । घर फर्किए । प्रहरीमा किन उजुरी गरेको भन्दै घरको सबै जनाले घरबाट निकालिदियो । आफु बस्ने कोठामा ताला लगाइदिएको छ । अव कसरी र कहाँ बस्ने ? पिडित विमला भन्छिन् ।
सरोजसँग वैवाहिक बन्धनमा बाँधिएकी विमलाको विवाह दर्ता र नागरिता समेत बनाइ दिएको छैन् । श्रीमान् पनि सम्पर्क विहिन भएका छन् ।
पटक–पटक कुटपिट हुँदा गाउँ तथा प्रहरीसमेत छलफल भएको तर पनि कुटपिट नरोकिए पछि न्यायका लागि प्रहरीमा जाँदा परिवारजनले उनी बस्ने कोठामा ताला लगाई घरबाट निकाला गरिदिएपछि विमला माइतीको संरक्षणमा अहिले बसिरहेको छ ।
पिडित विमलाको बुबा लक्ष्मेश्वर यादवले, ‘ छोरीलाई कुटपिट भएको खबर सुनेर समधी गाउँकै मानिसहरुलाई समाजिक छलफल गराए । छलफल भएपनि विमलाका ससुरा घरमा बस्न दिनलाई नमानेपछि गाउँलेहरु न्यायका लागि प्रहरी/प्रशासनमा जानलाई सुझाए । प्रहरीमा उजुरी दिए । प्रहरीले उनीहरुलाई झिकाए । प्रहरीले उनीहरुलाई विवाह दर्ता र नागरिता बनाएर घरमा राख्नु पर्ने भनेका थिए । तर, विमला ससुरा पक्षकाले विवाह दर्ता र नागरिता बनाउने तयार छैन् । घर निकाला नै गरि दिए ।
श्रीमानसमेत सम्पर्कविहिन भएको र परिवारजनबाट घर निकालामा परेकी विमला अव कसरी न्याय पाउन सक्छ त ?
विमलामाथि भएको कुटपिटको शिलशिला
२०७३ बैशाख १८ गते पहिलो पटक आफुलाई कुटपिट गरेको पिडित विमलाले सुनाईन् । गाउँका मानिसहरुले छलफल गरेर घटना मिलाई दिएको थियो । त्यसपछि माघ २ गते देखी लगातार आफुमाथि कुटपिट हुन् थालेको उनले बताईन् । माघ ७ गते प्रहरीमा उजुरी गरे । उजुरीपछि श्रीमान्, ससुरा र सासु भारत भागेको उनले सुनाईन् । भारतको महुलीया विमलाकी सासुको माइती हुन् । १७ गते माघमा प्रहरीमा आफैँ विमलाका ससुरा उपस्थित भए । प्रहरी समक्ष विमलाका ससुरा उपेन्द्र यादवले फाल्गुन ५ गतेभित्र नागरिता र विवाह दर्ता बनाई दिने सहमति गरेका थिए ।
२०७२ जेष्ठ १७ गते सरोजसँग वैवाहिक बन्धनमा बाँधिदै विमला कुमारी ।
सहमति अनुसार सबै घर फर्किए
माघ २२ गते परिवारजनले उनलाई अलग गरिदिए । झन दुःख दिन थाल्यो । त्यसको भोलीपल्ट कुटपिट गरेको उनले सुनाईन् । फेरी माघ २४ गते प्रहरीमा उनी पुगिन् । २५ गते उनको श्रीमान् सरोजलाई प्रहरी केही घण्टा थुनामा राखेको थियो । फेरी विवाह दर्ता र नागरिता बनाई दिने सर्तमा छलफल गरी सहमतिपछि सबै घर फर्किए । उनको परिवारजनले त्यसको दुई दिनपछि माघ २७ गते सरोजलाई भारत भगायो ।
त्यसपछि सरोजका बुबा उपेन्द्रले प्रहरीमा पटक–पटक छोरालाई झिकाउने कागज गथ्र्यो । तर आफुलाई विवाह दर्ता र नागरिता नबनाई दिएको विमला बताईन् ।
बैशाख १६ गते फेरी सासु रामप्यारी, देवर मात्रिका, जेठाजु प्रमोदले कुटपिट गरेको उनले सुनाईन् । १७ गते प्रहरीमा उजुरी गरे । बैशाख १९ गते सबैलाई छलफलमा बोलायो । त्यही दिन देवर मात्रिका र जेठाजु प्रमोदलाई पक्राउ गरी थुनामा राख्यो । उता प्रहरीले उनका देवर र जेठाजुलाई पक्राउ गरेपछि साँझ घर फर्केकी विमलालाई सासु, ससुरा र जेठानीहरुले घरबाट निकाला गरिदिएको उनले बताईन् ।
सिरहा : राजपा नेपालले गरे संविधान शंसोधनको माग गर्दै ¥याली प्रदर्शन